Home » ထုတ်ကုန်များ » ကို C-tpye Frame ကသတင်းထုတ်
TJS ကို C-tpye အရွယ်အစားတန်ချိန်စွမ်းရည်ရရှိနိုင်အကွာအဝေး 25 / 35 / 45 / 65 / 80
ဒါဟာ EI အပိုင်းပိုင်းအသေးမော်တာအလွှာပြုလုပ်ခြင်း၏မြန်နှုန်းမြင့်လာကြတယ်များအတွက်သင့်လျော်သောဖြစ်ပါသည်, LED ရပ်တည်ချက်, တိကိုဖုန်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်လျှပ်စစ်သေးငယ်တဲ့တိကျစိတျအပိုငျး, သတ္တုထုတ်ကုန်များ။
600 X ကို 300 X ကို 75 မီလီမီတာ
300 X ကို 210 မီလီမီတာ
300 X ကို 100mm
ချောဆီအရည်ကြည်မှုစနစ် Force ချောဆီကို
အမြင့်ဆုံးပွိုင့်တွင် Aoto Stop စံ
ထုပ်ပိုး: သစ်သား pallet ။
shipping: Suppling Worldwide မှဝန်ဆောင်မှု
1 ။ TJS-25 ၏အာမခံချက်ကဘာလဲ?
အဲဒီမှာအာမခံကာလအတွင်းသမျှအပိုပစ္စည်း / အစိတ်အပိုင်းများကိုတစ်နှစ်အတွင်းအဘယ်သူမျှမပိုကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်နှင့်ဘဝတစျခုလုံးအတှကျအစက်စောင့်ရှောက်မှုပေးထားပါလိမ့်မယ်။
2 ။ သငျသညျကိုနှစ်သက်နိုင်သည့်ပြီးပြည့်စုံကုန်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကမ်းလှမ်း?
H-Frame ကကို Double-Crank အမြင့်မြန်နှုန်း Precision စာနယ်ဇင်း TJSH-80T
အလိုအလျောက်ကြှေးမှေး TJS-65T နှင့်အတူမြင့်မားသောအမြန်နှုန်းမတူစာနယ်ဇင်း
အပြီးအစီးလိုင်းနှင့်အတူနှစ်ချက်ပွိုင့် Precision တံဆိပ်ထုစာနယ်ဇင်း TJSH-45